RAHARAHA NOSY MALAGASY : « Tokony hampitovy fomba fijery ny mpanao politika rehetra »
Tonga nanatitra antontan-taratasy momba ny fitakiana an’ireo Nosy Malagasy teny anivon’ny Antenimieram-pirenena ny antoko Otrikafo, omaly. 16 octobre 2020
Nohamafisin’izy ireo ombieny ombieny fa rehefa Nosy Malagasy no takina dia tokony hampitovy fomba fijery ny mpanao politika rehetra satria fiandrianam-pirenena no resaka.
Nijoro hatrany ary efa nanatanteraka hetsika hoentina hanamafisana ny fitakiana ireo Nosy Malagasy, izay bodoin’ny Frantsay hatramin’izay ny antoko Otrikafo. Raha nangina nandritra ny fotoana maro izy ireo dia nivoaka tamin’izay fahanginana izay, omaly. Efa azo lazaina ho miverina amin’ny laoniny ihany koa ny fiainam-pirenena ary na ny mpitondra tenin’ny Governemanta aza dia nilaza fa handinika ny fivoriana faharoa izay hihaonan’ireo vaomiera siantifika miady hevitra ny mikasika ireto Nosy Malagasy ireto.
Omaly maraina, tonga nanatitra antontan-taratasy momba ny fitakiana ireo Nosy malagasy teny amin’ny Antenimieram-pirenena ireo mpitarika ny antoko Otrikafo. Araka ny fanazavana voaray dia efa fotoana nifanomezana tamin’ny filohan’ ny Antenimieram-pirenena, Christine Razanamahasoa io, saingy noho ny adidy aman’ andraikitra izay sahaniny dia tsy tao izy ka tsy afaka nandray azy ireo. Araka izany dia andrasana amin’ny fotoana hafa indray ny fandraisan’ ny Antenimieram-pirenena an’ity antontan-taratasy ity. Antontan-taratasy izay mirakitra ny fangatahan’izy ireo amin’ny Antenimieram-pirenena ny tokony hitakiana ireo Nosy Malagasy ireo. Nohamafisin’ity antoko ity fa mahakasika ny fiandrianam-pirenena ireo Nosy Malagasy ireo, ka tsy tokony hisy resaka tsy fitoviam-pijery ara-politika mihitsy rehefa ireo Nosy malagasy no takina. “ Izahay dia mametraka fa ny ady atao amin’ ny fitakiana ireo nosy malagasy dia tsy tokony hisy an’ izay tsy fitoviana fomba fijery ara-politika izay. Mihevitra izahay fa manomboka any amin’ ny Filoham-pirenena ka hatrany amin’ ny farany ambany dia tokony hiezaka hanambatra hery na mitovy hevitra na tsy mitovy hevitra. Na Mpitondra Fanjakana na tsia, dia tokony hiray hina aloha isika fa fiandrianam-pirenena no resahina. Izay ny antony nahatonga anay nandeha teny amin’ ny Antenimieran-doholona sy ety amin’ ny Antenimieram-pirenena. Mila esorina mihitsy aloha ny tsy fitoviana fomba fijery politika ”, hoy ny fanazavana.
Raha ny fihetsiky ny Frantsay hatreto, momba an’ireo Nosy Malagasy ireo, dia mifanipaka tanteraka amin’ny fifampiresahana izay tapaka tao anatin’ilay fivoriana voalohan’ilay vaomiera siantifika. Ny Filoha Frantsay aza sahy nilaza fa « Frantsa eto », raha nitsidika ny Nosy Sambatra tamin’izany fotoana izany. Manoloana izany no tsy tokony haneken’ny Fitondram-panjakalana Malagasy lembenana. Efa mihamaro ihany koa ireo antoko sy fikambanana miray feo amin’ny hetsika fitakiana ny famerenana ireo Nosy ireo.